Ọzụzụ na Odighi Maggot Cultivation na 99 City • Yurie BSF
Ọzụzụ na Odighi Maggot Cultivation na 99 City
Yuria | Feb 16, 2019 | Odorless Maggot Cultivation Training
E ọzụzụ ++ Modern BSF Cultivation na-enweghị Odor Ọzụzụ
BSF Nkuzi nke oge a bụ naanị ọzụzụ maka ọzụzụ ++. nke na-eme ka ị nwee ike ịga nke ọma. Niile na-azụ + ọzụzụ nkuzi maggot akụrụ Ị nwere ike ibudata ya site na ngwa Yurie BSF na PlayStore. BSF ọzụzụ ọzụzụ na Yurie BSF Ị nwere ike ịhọrọ ọrụ kachasị nso na obodo gị. N'ihi ọzụzụ Maggot ehi ++ Ị nwekwara ikike ịme ihe na Yurie BSF ugbo na-agbasawanye karịa obodo ndị dị na 99 niile na Indonesia. Nkụzi anụ ụlọ BSF bụ nke na-adịghị mma na a nwalere nke ọma.
Ụdị Ọzụzụ Odighi Akwukwo Igbo
Malite site na ị denyere aha
Mgbe ahụ, a ga-enye gị ohere ịnweta ngwa Yurie BSF na PlayStore
A ga-akpọkwa gị ka ị banye na mpaghara FB omenala na-enweghị isi
E zigara 2X24 awa mgbe ị debanyere aha
N'enyefe osisi, a na-edozi nsen larvae dị ka njikere
Ị nwere ikike ịme otu ubi na otu n'ime ugbo Yurie BSF
Ntuziaka mgbe emechara ọrụ ubi ruo mgbe ị ga-eme nke ọma
Tupu ịbanye, ị ga-edebanye aha site na ịnye ihe àmà nke ịkwụ ụgwọ maka ụgwọ ọzụzụ site na nnyefe ego bank BRI.
A ga-arịọ gị maka kaadị nke kaadị SIM dị ka ihe ndekọ ndetu.
Yurie BSF Access Access
Mgbe ị na-ezipụ akaebe nke nnyefe, ị ga-enweta paswọọdụ pụrụ iche iji mepee ngwa Yurie BSF na playstore.
Na ngwa Yurie BSF a kwadebere ụlọ ahịa ahụ:
Ntuzi akwukwo ato maka akwukwo na omume
Nkuzi maka odighi akwukwo ndi ozo
Ụdị na-eme ka ọ bụrụ ntụ
Maggot ntụ ọka
Njikere mmiri mmiri na-emepụta nri (POC) na akwukwo akwukwo na akwukwo osisi
Ezi ngwa nke fatịlaịza siri ike
Mgbe ịchọta igodo okwuntughe, ị ghaghị imeghe, budata ma lelee vidiyo omume ebe ọ bụla ị nọ ma ọ bụrụ na enwere njikọ Ịntanetị.
Ngwa Yurie BSF dị oke ukwuu n'ihi na e nwere ọtụtụ vidiyo na akwụkwọ dị na ya, mana na nkà na ụzụ dị elu, njedebe nke ngwa ahụ na-aghọ ìhè na 16MB.
Anyị kwadebere ụlọ ọrụ a dị elu ka e nwee ike ibudata ngwa Yurie BSF ọbụna site na ụdị ochie cellphone.
Jikọọ na ngalaba nzuzo
Nzọụkwụ gị ọzọ ga-akpọ gị òkù ka ị banye n'ime ìgwè ndị na-ahụ maka ụbụrụ nke nzuzo nke oge BSF oge a na-enweghị isi.
Na FB, otu nchịkọta nzuzo nke nchịkọta BSF nke oge a na-enweghị isi na-ekewa n'ime ọkwa atọ, ya bụ
N'ime otu a, ị ga-ezute ndị enyi Yurie BSF niile na Indonesia. Ha na-akọrọ ahụmahụ ha ma guzobe obodo n'obodo ha.
Biko jiri mkparịta ụka mara mma kwurịta ya. Anyị ga-arụsi ike na njakịrị "egwu" nke na-adịghị na ọnọdụ na ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla jikọrọ aka na mgbalị iji na-arụ ọrụ na-aga nke ọma Maggot BSF odorless.
Nke a na-eme ka ndị enyi Yurie BSF na-elekwasị anya na-arụ ọrụ kwa ụbọchị n'ịzụlite ikpuru.
Na ọkwa ọ bụla, otu onye ma ọ bụ abụọ ndụmọdụ ga-eduzi gị. Ya mere, ihe a na-ewepụta bụ nrịta nke omume abụghị usoro ikpe na ozizi ụgha.
Nnyefe nke ngwongwo
Na ngwugwu ọ bụla a zụrụ, a ga-enyekwa gị nri maka omume nke gị na ụlọ gụnyere mkpụrụ, àkwá, akwa na ngwaọrụ ndị ọzọ na-akwado.
A na-ekewa ngwugwu a n'ime ụzọ abụọ, ihe ndị na-adịghị ndụ na ihe ndị dị ndụ. A ga-ezigara edemede ndị na-adịghị ndụ 2 x 24 awa mgbe anyị natara ihe akaebe nke ịfefe,
A ga-ezigara ihe ndị dị ndụ dịka mkpụrụ, àkwá, larvae, wdg dịka njikere gị. A na-ezubere nke a ka e wee nweta ihe ndị dị ndụ ka ọ gwụcharachaa.
Ngosipụta nke nnyefe nke ngwongwo site na ọrụ ozi-e anyị na-ahọrọ n'ụdị nataghachi ị ga-enyocha ebe ebe mbupu.
Mgbe i nwesịrị ike ibudata ngwa ahụ ma mụta ihe n'onwe gị wee sonyere n'òtù ahụ, ị ​​ga-amụta itinye aka na otu n'ime ugbo Yurie BSF nke na-agbasa karịa 99 obodo niile dị na Indonesia.
Onye nkuzi nke a zụlitere gị ga-egbu gị ma nweta akwụkwọ nke BSF oge a na-enweghị isi. Ya mere ị ga-amụta otu ihe ahụ.
N'ezie, nke a bụ ihe bara uru maka ị na-eme kpọmkwem na obodo dị nso. Ebe ọ bụ na anya dị nso, ịkwesighi ịkwụ ụgwọ buru ibu maka njem, ụgbọ elu ụgbọ elu, ụgwọ ụlọ obibi na oge na-agbanwe.
Kwado na Ịga nke Ọma
Mgbe usoro a dị n'elu, ị ka ga-enweta nduzi ruo mgbe ọ ga-arụ ọrụ.
A ga-azụta ikpuru gị site Yurie BSf maka Rp7.000 / kg. ya mere ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị banyere ịchọta ahịa ọzọ.
Ma ọ bụrụ na ịchọghị ịre Yurie ọ dịghị mkpa. Ị nwere onwe ịhọrọ ebe ịchọrọ ịnọ ere ahi- ahụhụ ahụ.
N'oge na-adịghị anya, ọrụ nchịkọta na-enweghị ntụpọ na-emepụta ọtụtụ nnụnụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ọkụ na-ere ere na Yurie BSF.
Anyị enyela ego enyemaka nke enyi nke Rp100.000.000, - ịmepụta mmepụta nke ikpuru.
Ndị ọzọ Uru:
Ị nwere ike ịjụ ndị nkụzi ọkachamara ozugbo
Ịmụta na ọzụzụ na offline (omume ubi) nwere ike ịbụ mgbe ọ bụla na ebe ọ bụla ị chọrọ. Ịnwere ike ibudata isiokwu okwu.
Nwee Ihe Ịga nke Ọma
A nwalewo uzo mara nri nke ahihia nke oma ma nwee otutu ndi enyi enyi Yurie BSF
Ihe kachasị ọhụrụ
A na-emelite ihe ọ bụla na-emepụta ihe mgbe ọ dị mkpa
Ekele site na ndị nkụzi na-esonyere anyị n'ụdị vidio vidiyo na ezigbo testimonials na ị nwere ike ịhụ LIVE na YouTube channel Yurie BSF.
Kedu ụgwọ nke ngwugwu ọzụzụ?
Ịzụ ọzụzụ ++ adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ n'efu, ihe niile ị na-akwụ maka bụ ngwugwu. Ọnụahịa nke ngwugwu ngwugwu sitere na Rp100.000-Rp4.000.000 dabere na ngwugwu ị na-ahọrọ.
Ọ dị mma maka ndị na-amalite?
Ọ dị mma. N'ihi na a na-eji ihe nchịkọta akwụkwọ maka akwụkwọ na vidio nkuzi nke nta nke nta site na zero iji nwee ihe ịga nke ọma. Naanị ị ga - ahọrọ ịzụ ọzụzụ ++ ọzụzụ dị mkpa.
Enwere ike ịkwụ ụgwọ niile ozugbo?
Mba. Ngwongwo ngwongwo azutara bu dika ihe atukwasiri anya nke ihe gi na ahia.
Enwere ike ibudata nkuzi ahụ?
Ee, ị nwere ike ibudata nhazi akwukwọ.
Jikọọ ugbu a na 2000 ++ ọzọ!
Kpọtụrụ Anyị / WA 0812-2105-2808
Ekele na-echekwa ma na-eche na m na-akpa